Sukuyeka isikolo: Kutheni kusekho ixabiso kwiKholeji - Okunye
Eyona Okunye Sukuyeka isikolo: Kutheni kusekho ixabiso kwiKholeji
Sukuyeka isikolo: Kutheni kusekho ixabiso kwiKholeji
(Ifoto: Visha Angelova / Flickr)
ukujonga umnxeba simahla
Ngaphantsi konyaka odlulileyo uY Combinator wanika abahlobo bam kunye nam ithuba lokulandela ukuqala kwethu ngokungena kwinkqubo yabo.
Kwakungafuneki ukuba ndiyishiye ikholeji ngokulungileyo, kwakufuneka ndikhuphe isemester enye. Kodwa ndandizazi. Bendingazokwazi ukubuyela ekusileni kweeklasi emva kweenyanga ezi-8 ngaphandle kwazo, ngaphandle kwempumelelo yenkampani. Ukuhamba okwethutyana kuya kuba sisigxina.
Ndixubushe ngesi sigqibo nosapho, abahlobo kunye nabacebisi. Isigwebo sahlulwa, ke ndafuna ingcebiso kwi-Intanethi. Emva kokufunda amanqaku amaninzi, ndiqaphele ipatheni eyahlukileyo kwiziphumo: oosozigidi kunye noosomashishini abazizidalwa baxhasa ubuhle bokuchitha ixesha lakho lokufikisa / lokufika kwiminyaka engamashumi amabini ngaphandle kweklasi. Abaseki abayifuni ikholeji, ndeva ndiphinda-phinda.
Ngokuchaseneyo, zonke izibonelelo endidibene nazo ezindikhuthaza ukuba ndihlale esikolweni zinethoni eyahlukileyo- eyomama:
Imfundo yasekholejini ikwenza ukuba ube nakho ukufumana umsebenzi wamaphupha akho. Oku kuyinyani kwimisebenzi emininzi kodwa kwakungonelanga ukundigcina ndikhuthazeka. Umvuzo wawungenangqondo.
Uninzi lwabantu abaphumeleleyo banazo izidanga zekholeji. Oku kunuka ibango elithandabuzekayo. Kwaye ngaphandle koko, ukukhangela iibhokisi akundonwabisi.
Idigri ikunika umnatha wokhuseleko ukuba ubuyele kuwo. Oku akuzange kubethe kum ngenxa yokuba andifuni ukuchitha eyona ndawo ingcono yolutsha lwam ndisakha isikhuseli. Ndifuna ukwenza into endiyithandayo - ngoku .
Ndaziva ukuba andiliva ibali elipheleleyo. Kukho into eduduzayo malunga nokuva omnye umntu, nangona kunjalo, izizathu zokwenza isigqibo: kunokukwenza uzithembe ngakumbi ngokwakho. Kumntwana wasekholejini onekhono kwitekhnoloji kunye nokuqhuba ukwenza izinto ezimbi, liliphi ixabiso ebelikho kwimfundo ephezulu? Ndizabalazile ukufumana inqaku eliphendula lo mbuzo ngolwimi lwam. Le yile nqaku.
Izifundo kunye neAustodidact
Mhlawumbi esona sizathu siphambili nesichaziweyo sokuhlala esikolweni kukuba iiklasi ozithathayo zikushiya ngezakhono ezibonakalayo. Ngelixa oku kunokuba yinyani, iyaphoswa linqaku- ezona zifundo zixabisekileyo azimiseli ukuba kufundwe ntoni, kodwa indlela yokufunda.
Ndihlala ndisiva intetho evela kwabanye abafundi yokuba imfundo yenkululeko ayinamsebenzi. Bayibamba inkolelo yabo yokuba isidanga sobugcisa sixabiseke ngaphezu kwesidanga esingengobugcisa, ngokungathi sidlulisa ukongama komntu okanye kobukrelekrele:
Isidanga kwi IsiNgesi / iSociology / ifilosofi / njl.] ayiguquleli kwizakhono kwindawo yokusebenza. Kutheni ungafundi nto iyasebenza ?
Le ndlela yokucinga ayinangqondo iphikisayo kwaye ichasene nengqondo. Yonke inkalo yokufunda inokubaluleka kwengqondo, nokuba uyakuxabisa okanye akunjalo. Abaphengululi bandise ububanzi nobunzulu bokuqonda komntu kwizifundo abazifumana zinyanzelisa. Ukufunyanwa kwezinto ezinkulu kuhlala kuvela kwiindawo apho ukusetyenziswa kwesicelo kungabonakali ngokukhawuleza. Le ngongoma yezemfundo.
Yonke ingqeqesho, ngokwendalo yayo, inendlela eyahlukileyo yokufunda. Nganye ikunika iindlela ezintsha zokuqonda izinto kunye nokunxibelelana kwazo. Ezinye iimodeli zengqondo aziphosakalanga okanye zichanekile, zahlukile nje, kwaye mhlawumbi azidibani. Izixhobo zohlalutyo ozifumanayo ngokufunda umhlaba zisetyenziswa kakhulu kunalo naliphi na iqondo.
Unokuphikisa ukuba kunokwenzeka ukuba wandise ulwazi lwakho lwamacandelo ahlukeneyo ngaphandle kwekholeji. Kwaye uza kuba ulungile! Ngokuqinisekileyo unako.
Kodwa awungekhe. Awungekhe kuba kunzima. Awungekhe kuba awazi ukuba uqale ngaphi. Awungekhe kuba xa uthi krwaqu nje, nayiphi na intsimi engahambelaniyo nomtsalane wakho ngoku iya kubonakala ikruqula. Awungekhe kuba kunzima ukufumana ixesha lokujonga izihloko ezingahambelani nomsebenzi wakho okanye ukuqala.
Isikolo siyakunyanzela ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela. Ungayithandi intsimi yesifundo, kodwa kubalulekile ukuba ufunde izinto ongazithandiyo ukuba ube lixa elithile lokuba ngumntu ojikeleze kakuhle. Cinga ukuba izinto ezininzi ezibalulekileyo ziqale kwimpambano yamacandelo amaninzi. Ngapha koko, zonke ezona zifundo zixabisekileyo ndizithathileyo azihambelani nesayensi yekhompyuter.
Abafundi abalungileyo bayazifundisa. Ndiza kuthetha phandle: kunqabile ukuba ndiye eziklasini. Abanye bangandibiza ngokuba yi-autodidact -umfundi-kodwa andikholelwa ukuba ikhona into enjalo. Ndihlala ndifunda komnye umntu, nokuba ngumhlohli, umbhali wencwadi yesikhokelo, okanye ababhali abadibeneyo benqaku leWikipedia. Ngamnye ulwahlulo olwahlukileyo, kwaye wonke umntu uneseti yakhe yokukhetha.
Kuya kuba kukungathembeki kum ukuba ndingathethi ukuba kutheni ndiyicekisa (kwaye ndiqhubeke ndidelela!) Iikhosi ezithile: iiklasi ezimbi ezinekharityhulam embi ezifundiswa ngabafundisi ababi yinkcitha xesha lakho. Ukuqiqa apha ngasentla kukwimeko efanelekileyo, xa iikhosi zakho zikukhuthaza ukuba ufunde okungakumbi kunokukugcwalisa ngomsebenzi omkhulu. Lungiselela ukubandakanyeka kweeklasi kunye noonjingalwazi abaya kukutyhala ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela ngokwasengqondweni. Thintela iiklasi ezimbi ngazo zonke iindleko.
Uninzi lwezifundo ezibaluleke kakhulu zekholeji azinakufundwa ezincwadini. Isikolo siyinto enomdla kumava akufundisa umda womzimba, weemvakalelo kunye nowengqondo. Xa idityaniswe nabahlohli, inkqubo yesidanga sokuqala ikunika olona hlobo lukhulu lwamathuba okufumana izakhono ezitsha, kokubini kwabo ufunda nabo nakwiziko. Akusayi kubakho elinye ixesha-nokuba kukuqalisa-apho uya kujikelezwa kukumila koontanga abakukhuthazayo kwaye bakwenze ukuba ufunde ngakumbi.
Awunguye uMark Zuckerberg olandelayo.
… Kwaye kulungile!
I-Tech inengxaki neenkcubeko zobuntu. Kubonakala ngathi wonke umntu ukholelwa ukuba yi-CEO yeprojekthi elandelayo ye-billion-dollar.
Nangona kunjalo, oosomashishini abaninzi abasakhasayo baya phambili, bezama ukulinganisa ubomi babo kunye nezigqibo zabo babakhonzayo. Kodwa ukuba uphila ubomi bakho njengesithunzi somnye, uyakuqonda ukuba kukuzibetha. Akusayi kubakho Mark Zuckerberg olandelayo. Akunjalo ukuba isebenza njani.
Phila ubomi bakho. Ungazami ukuba ngulomnye umntu olandelayo - yiba lilandelayo kuwe. Ndibetha ukuba amabhongo akho anomdla ngakumbi.
Inkcubeko yokuqalisa iyaphikisana nale meko. Ndiyabazi abo bakhangela iindaba zeHacker / iTechCrunch / umngxunya wokunkcenkceshela wokukhetha amanyathelo afanelekileyo ekufuneka bewathathe ukujika inkampani yabo entsha ibe yinyathi. Ukuba awunaso isicwangciso seminyaka emihlanu esicacisiweyo, sele usilele.
Yijikeleze. Awudingi isicwangciso sobomi. Mhlawumbi awufuni nenye. Ikholeji sisimemo sokuzifumanisa ngokwakho. Thatha ithuba loku.
Usomashishini oshiyekileyo ekuhlaleni uye waba yinto nje yamajelo eendaba anamhlanje. Ukuyeka ukwakha ishishini kuyinto yefashoni.
Abanye abantu abakrelekrele baye bazenzela imali kule meko ngokukhuthaza abona baqaqambileyo nabakhanyayo ukuba bayigqibe ngaphambi kwexesha imfundo yabo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-Thiel Fellowship ikhetha abafundi abambalwa unyaka nonyaka ukuba bayeke esikolweni iminyaka emibini ukuze batshintshe isibonelelo kunye nengcebiso ebanceda ukuba balandele ukuthanda kwabo (ngesiqhelo ukurhweba). Ndinezihlobo ezininzi kwi-Thiel Fsoci, ndikholelwa ukuba le nkqubo ikhetha abagqatswa abakumgangatho ophezulu, kwaye ndiqhwabela izandla uManyano ngokwenza ukuba kwamkeleke ngokwasentlalweni ukuyeka isikolo okanye ukugqitha konke.
Andivumi, nangona kunjalo, andivumelani ne-thesis esisiseko yenkqubo. Ezi nkqubo zenza into efanayo kanye nenkqubo yemfundo esekwe kwikholeji abayichasayo: zibonelela ngesigqubuthelo esincinci sokuqinisekiswa kwangaphandle. Ibhaso - isidanga - oko akuthethi ukuba uyenzile. Umsebenzi onzima usafuneka wenziwe.
Ndiphantsi kwengcinga yokuba i-Thiel Fellowship ikhangela abafundi abangakwaziyo ukulinda ukuba baphume kwaye bekhangela umququ wokugqibela oza kubatyhalela ngaphaya komphetho. Nangona kunjalo, ukuba oko kutyhala kokugqibela kuza ngaphandle, kunokuba kungenxa yezizathu ezingalunganga. Zibuze ukuba uza kwenza isigqibo esifanayo ukuba awufumananga kuqinisekiswa nantoni na. Ukuba usenokuphuma, emva koko, ngokungathandabuzekiyo, iinkqubo ezinje ngeTeel Fsoci zinokuba zilungele wena.
Ndithetha ngamava kunye nokuqwalaselwa xa ndisithi ukuba uza kwenza inkampani, ungayibonisa ngelixa usesikolweni. Ukuba iqala ukuthatha kunye neeklasi zingena endleleni, ngumzuzu ofanelekileyo wokuyibiza ukuba iyayeka ekholejini.
Musa ukuzikroba ngokwakho, nangona. Zininzi ezinye iiprojekthi ekufuneka usebenze kuzo ngelixa usafunda. Kwiminyaka yam yokuqala emi-3 e-UC Berkeley, ndakha usetyenziso kwi Isifukamisi sokuqhuba somfundi , waphosa i eyona hackathon inkulu ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ndivelise iqela le Isoftware evulekileyo . Ndizithatha zonke ezi zinto njengezixhobo ekukhuleni kwam emsebenzini.
Akukho sizathu sokulinda de uphumelele ukuze uqale ukusebenza kwizinto ozithandayo. Hlanganisa nabahlobo kwiiprojekthi zeklasi. Yakha into - nantoni na - nokuba ayiyiyo ishishini. Bamba umsitho okanye unyuse ingxowa-mali ngesizathu. Yenza uphando phantsi koprofesa. Sebenzisa izibonelelo zekhampasi yakho ukuze uzuze. Yonke into ebalulekileyo kukuba wenze into oyithandayo.
Okwangoku, eyona nto ibaluleke kakhulu endiyenzileyo ekholejini ayinakuphatheka.Ndifumene indawo yabahlobo endicelomngeni mihla le. Ukujikeleza ngeenxa zonke kunye neqela elifanelekileyo loontanga yeyona nto ibalulekileyo ekwenzeni ukuba amava akho aphantsi abe mnandi kwaye kufanelekile. Gcina ixesha kulwalamano lwakho. Ubomi ngaphandle kwamaqamza ekuhlaleni obuhlangeneyo bunokwahluka. Xa ungena kwihlabathi lokwenyani, ubuhlobo bakho yinto oza kuyibamba.
Ubomi bufutshane. Ubutsha bakho, ukuba yi-subset, bufutshane. Unetyala lakho lokuzonwabisa (ngakumbi).
Zininzi izinto onokuzenza ngelixa usesikolweni. Ndicinga ukuba abaninzi abakhuthaza ukuyeka isikolo bayayiphosa into yokuba singabantu. Asikhuthazwa kuphela yimivuzo yexesha elide. Nalu uluhlu olufinyeziweyo lwezinto oqinisekisiweyo ukuba uya kuphoswa kuzo xa uthathe isigqibo sokushiya ikholeji:
Dibana nabantu bobudala bakho abaneembono ezahlukeneyo zehlabathi okanye ubuhlanga / ezezimali / ezendawo / imvelaphi yezopolitiko.
Yonwabela ixesha elikhululekileyo kunokuba uyazi ukuba wenze ntoni, ushiya igumbi kwi-adventure (okanye utye nje iitshizi zeeshizi kwaye udlale imidlalo yevidiyo).
Joyina elinye lamaqela abafundi abasisigidi, okanye uqale owakho.
Hlalani kubudlelwane, ubuqhetseba, ukubambisana, okanye nayiphi na enye indawo ejoliswe ngabafundi.
Yandisa ingqondo yakho kwindawo eyamkelekileyo ekuhlaleni.
Sebenzisa ihlobo lakho ukwenza isampulu yemeko-bume eyahlukeneyo yomsebenzi ngoqeqesho, ukuhamba ujikeleze umhlaba, okanye uchithe ixesha elibalulekileyo kunye nabahlobo kunye nosapho.
Bukela umdaniso, ikwayari, iholo yemidlalo yeqonga, kunye nezinye iintlobo zomdlalo obonisa ofunda nabo
Yakha izinto ezintle kwaye udibane nabahlobo bexesha elide Iikholeji ezihlangeneyo .
Nxiba i-sweatpants yonke imihla.
Eyona nto iphambili kukuba ikholeji inokuba lelinye lawona maxesha amnandi ebomini bakho. Ndidibene nabahlobo bam abasenyongweni eCal. Ezona nkumbulo zam zimnandi zivela kumava alapha. Andifuni ukuhamba.
Xa ndakhetha ukuyala i-YC ukuze ndigqibe isidanga sam, isigqibo samangalisa wonke umntu. Nangona kunjalo, akukho mntu wamangaliswa kunam. Ndichithe ubomi bam bonke ndibamba ithuba elilungileyo elinokundikhupha ezifundweni kube kanye. Ukanti ndakuba ndiyifumene, ndaphinda ndabuya (hayi ngenxa yokoyika, kodwa ngenxa yokuqonda.
Ndiye ndaqhela ukucacisa izizathu zam zokuhlala esikolweni. Ngokubanzi, ngumbuzo wokuqala abanye abawubuzayo xa besiva ukuba bendisecicini lokuyeka isikolo. Kodwa kunqabile ukuba babuze ukuba ndiziva njani ngesi sigqibo. Ndingathi lo ngumbuzo obaluleke ngakumbi. Ewe, ndiziva njani, ngaphezulu kwesiqingatha sonyaka kamva?
Ndonwabile ukuba ndisekholejini, kwaye andinakukwazi ukulinda unyaka ophezulu.
UAlex Kern ngumvelisi wesoftware, usomashishini, kunye nomfundi e-UC Berkeley. Uyanceda ukubaleka @CalHacks , @StartupBerkeley , kunye @KairosSociety EMantla California. Eli nqaku livele ekuqaleni Phakathi .
Buza uMlawuli weCasting: URick Millikan we 'The X-Files'
IiAdventures kuVoto loMyalezo woMkhankaso, icandelo 2
Zixaka kangakanani ii-imeyile ezivuzayo zikaSarah Jessica Parker?
Isifundo semeko: Indlela yokuSungula i-Top 10 yeNew York Times ethengisa kakhulu
indawo zamaKristu zokuthandana zasimahla kwi-Intanethi
Ujeff bezos owayengumfazi
ixesha lokukhanya 6 umhla wokukhutshwa kwi-netflix
amaphepha amhlophe abuyayo ajonge phezulu
Ungasusa njani ulwimi lwe-adderall
UJudith Miller Amaxesha amatsha eYork
Yonke inkqubo yokuhluza amanzi kakuhle endlini